Ogaden News Agency (ONA) – Dhalinayarada OYSU/Yemen iyo haya’dda INTERSOS oo xafiiska haya’dda ku kulmay
Dhalinayarada OYSU/Yemen iyo haya’dda INTERSOS oo xafiiska haya’dda ku kulmay
Ururka dhalinyarada OYSU faraca Yemen iyaa haya’da INTERSOS taariikhdu markay ahayd 23 /io/2013 kulan kula qaatay dalka Yemen.
Kulanka ay isugu yimaadeen ururka OYSU fariciisa dalkaYemen iyo haya’adda INTERSO oo lagu qabtay xafiiska haya’dda ayaa lagaga wada hadlay arima badan oo quseeya shacabka S.Ogadeniya ee ku dhibaataysan dalkaYemen sidii wax loogu qaban lahaa.
Dhalinayarda OYSU ayaa soo bandhigey dhibaatada ku haysata dadkooda laga soo qixiyay dalkoodii ee halkaa jooga, waxayna tilmaameen inay haystaan dhibaatooyin faraba oo kala duwan iyagoo haya’da ka codsadey in wixii karaan keeda ah wax kala qabato, taasoo haya’dda INTERSOS ay aad usoo dhowaysay waxayna balan qaaday intii karaan keedaa wax kala qabanayso. Waxayna isku afgarteen in lawada shaqeeyo xidhiidh intaa kabadana lawada yeesho.
INTERSOS waa haya’d samafal (Riix halkan) oo caalami ah oo dalal badan oo caalmka ah ka shaqaysa gaar ahaan goobaha ay ka dagaalada ka dhacaan ee dadka shacabka ay dhibaatada ka soo gaadho. Haya’dda INTERSOS oo ka diiwaan gashan dalalka Yurub gaar ahaan dalka Talyaaniga ayaa meela badan oo caalamka ah ka hawl gasha sida Somaliya.
Kulanka ay labada dhinaca ee OYSU/Yemen iyo ITERSO ayaa ahaa midkii 1aad ay isugu yimaadaan waxauyna labada dhanba ku tilmaameen inuu ahaa kulan loo baahnaa oo raja fiican dhalin doona.
s.c.w waan u hambalyeynayaa ururka OYSU ee Yemen hawsha fiican ee hayaan